Tsika Dombo, Dombo rechisiki, Dombo reMadziro - LONGSHAN
1. Zviri nyore kuiswa, uye nemutengo wakachipa. Iyi yakajeka nhema nhema yetsika ibwe iri nyore kwazvo mechi pamwe nerimwe ruvara. Gadzira dhizaini yako izere neiri rinoshamisa dombo rechisiki 2. ...
Kune ichi chigadzirwa isu tinodaidzawo kuti chando chena mapaneru, iyo yepamusoro inoita kunge sinou, kana ipaneru iri pasi pechiedza chezuva, pane imwe nzvimbo inopenya pamusoro, inotaridzika kuva yakanaka kwazvo. Ichi chakakamurwa kumeso ...
Ichi chimwe chechigadzirwa chakakurumbira mumusika wematombo, isu tinotumira kunze ichi chigadzirwa kune ese epasirese makore makore mazhinji.Mhando dzakapfava dzegrey dzinozadziswa nekusiyana kwepanyama uye kuvezwa kwedombo. U ...
Iyi yakasikwa slate ledger mapaneru ine yakadzika browns, grays uye mazano eengura. Isu cam tinopa akasiyana mavara, magumo, magadzirirwo, uye masitayera pamwe nekubatanidza makona emakona kuitira kuti iwe ugone ...
Ichi chigadzirwa chine multicolor, chinotaridzika kuve chakanakisa uye iyo yepamusoro ichiri iine yakasarudzika yakasarudzika dombo dhizaini uye ruvara mushure mekugadzirwa, kucheka nekubatanidza musanganiswa. Icho chisarudzo chakanyanya che d ...
Ndicho chigadzirwa chinonyanya kufarirwa pamusika wedombo, Iyo yepamusoro ichiri iine yakasarudzika yakasarudzika dombo dhizaini uye ruvara mushure mekugadzirwa, kucheka nekubatanidza musanganiswa. Iyo mapaneru ese akagadzirwa ne ...
1. Iwo matanda mana, hurefu hwese i40cm. Inopindirana 5cm .Iyo yakajairwa chimiro iri Z uye S. Iyo ukobvu ndeye 8-15MM, iyo wight iri nyore kwazvo, saka zviri nyore kutakura uye kuvaka. 2. Iyo yose pane ...
1. Matombo Matete Masvingo Mapaneru akareba matete emabwe akarongedzwa muchimiro. Iwo anonamirwa pamwechete zvinonyanya kushandiswa kune ekunze kufukidza uye nzvimbo yemoto kufukidza. Imwe seti yetile ine musanganiswa ...
Yedu Chigadzirwa Kesi
Dombo reLongshan rakagadzwa muna 1988, riine guta rakanyoreswa re10millon yuan.Inowanikwa muYixian, Baoding City, Hebei muChina.To kuita kuti longshan rive mubatanidzwa wemazuva ano nekugadzirisa, kugadzira, kutengesa nekushandira ...